Blockchain Izindaba 8 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 8, 2018 admin
Blockchain Izindaba 8 Januwari 2018
Ron Paul zivunyelwe Bitcoin
Owabe Congressman Republican Ron Paul uthi konke bitcoin njengenhlangano lwemali ehlukile, inqobo nje konke mayelana impikiswano, fa virtual kusemthethweni.
Lo mqeqeshi owake wapheka Republican lesiShaya kusukela Texas muva wakhumbuza CNN ukuthi lapho Congress, wethula umthetho ukuvumela zezimali ukuncintisana ngoba uyamzonda isimiso samanje.
"Ngiyazenyanya uhlelo esinayo. I abakhwabanisi esemthethweni ngaso Reserve Federal. Lokho kuyinto misstep enkulu futhi inkinga enkulu. Ngakho abantu kumele babe nelungelo lokukhetha,"Lo Newsmax Insider uthi.
"Benza ekuqaleni lapho imali waqala. Khona-ke athatha zegolide nezesiliva. Futhi uhulumeni uthethe futhi bahlukunyezwe leyo ndinganiso futhi silawula ke. Futhi walibhubhisa kuleli zwe,"UPawulu wathi:.
"Ngifuna ukubhalisa zonke lezo ongakhetha futhi yini bantu bafuna ukusebenzisa njengoba imali. Kodwa akukho ukukhwabanisa. Awukwazi ukhwabanisa,"I-Texas Libertarian watshela CNN sika Michael Smerconish.
Ron uPawuli udokotela, kumbhali, ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili Congressman Republican. UPawulu washo amazwi afanayo kuyinto ezimbili-time Republican esobumengameli, kanye okhethiwe we Libertarian Party 1988 U.S. ngokhetho.
ViaBTC ukuvala esigcawini yayo ngoba izivumelwano yezimayini
IsiShayina izimayini bitcoin pool ViaBTC limemezele ukuthi kuzovala esigcawini yayo ngoba izivumelwano yezimayini kuleli sonto, Ukuthutha ukuthi kuza kwezinhlansi imibiko emisha ye ukuvinjelwa iziphathimandla kuleli zwe.
Encwadini ka-Jan. 8 isitatimende, ViaBTC wathi kwakuzothatha shaqa emakethe - lapho abasebenzisi ungakwazi ukuthenga izivumelwano entitling ukuba ethile amandla hashing (kanye ehambisana cryptocurrency izinkokhelo) - kuyinto-Jan. 10. Isizathu: inkampani efuna “ukulawula kokuqagela bavikele izithakazelo zimali zethu.”
“Sicela uqedele zonke ukuhweba ifu lakho izimayini inkontileka ASAP. Siyabonga ukwesekwa yakho,” ViaBTC wanezela.
ViaBTC kuqala umkhankaso walo ifu izimayini inkonzo ngoNovemba 2016.
I Ukuvalwa kuza ngemuva kwezinyanga ViaBTC shaqa cryptocurrency yayo exchange ekuphenduleni wokulwa iziphathimandla Chinese ku exchange ecosystem wezwe, wenqubo eyaqala ngemva nje ekuqaleni 2016. Izikhulu nabo bathuthela lokwenqabela ukusetshenziswa kwanoma kokuqala iminikelo uhlamvu lwemali (ICOs) ngo-September.
Nokho lapho azikho izinkomba ezibonisa kucace ukuthi izenzakalo ezimbili ezihambelana, isimemezelo zakamuva kulandela imibiko emisha ukuthi izikhulu eChina abafuna ukuvala shaqa kancane kancane bitcoin yasekhaya izimayini nokusebenza.
Ngokusho kwamaphepha lalikhona ngempelasonto kanti chasiselwe Oholela Iqembu Internet lwezezimali Izingozi Ukususwa kwaleso sikhunta kwabiza, somthetho-Chinese, izikhulu ufuna ukunqanda usekelo abavukuzi wendawo, obiza izinyathelo azungeze amandla ezweni ukusetshenziswa. Omunye imibhalo icele ukuthi izikhulu ukulungiselela izinhlelo inqubo enjalo by the 10th.
Ummeleli ovela ehhovisi Xinjiang le nhlangano waqinisekisa ukunemba imibhalo ukuze Quartz kodwa walile ukuphawula okwengeziwe.
Njengoba eminye kuboniswa Bloomberg, abavukuzi eChina ukuguquguquka abazidalayo kude ezweni, ibuke izindawo ezintsha e-Europe nase-North America. Isevisi izindaba libike ukuthi izikhulu China ufuna okumisa i “ehlelekile” ukuvala shaqa semvelo yezimayini.
deVere Iqembu uqala cryptocurrency ukuhweba lokusebenza
Thumela Previous:mayelana ICO: Ubani eqoqwe izimali kakhulu phakathi yokuthengisa ithokheni
Thumela Landelayo:Yocingo ICO izinhlelo